မိမိကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောခြင်း - Myanmar Network
Posted by Language Republic on December 7, 2012 at 10:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မိမိကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောခြင်း - ၁
A. We’re the second largest manufacturer in the country of glass for the car industry. One in three cars in this country uses our glass. (ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကားလုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကို ဒုတိယအကြီးဆုံး ထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ကား ၃ စီးထဲက တစ်စီးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မှန်ကို အသုံးပြုပါတယ်။)
B. How many plants do you have? (စက်ရုံဘယ်နှစ်ရုံရှိလဲ?)
A. We have five domestic plants but we also have factories in ten other countries. As well as supplying the car industry, we sell glass for buses, trains, ships and aircraft. (ပြည်တွင်းစက်ရုံ ငါးရုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြား နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှာလည်း စက်ရုံတွေရှိပါတယ်။ ကားလုပ်ငန်းအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အပြင် ဘတ်(စ)ကားတွေ၊ ရထားတွေ၊ သင်္ဘောတွေနဲ့ လေယာဉ်တွေအတွက်လည်း မှန်ကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။)
အောက်ပါအသုံးအနှုန်းတို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည် -
- We’re by far the largest producers of… (ကျွန်တော်တို့ဟာ …………. ရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ထုတ်လုပ်သူတွေပါ။)
- We’re the third biggest in the country. (ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်တွင်းမှာတော့ တတိယ အကြီးဆုံးပါပဲ။)
- We’re among the largest/smallest in the region. (ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒေသတွင်းမှာတော့ အကြီးဆုံး/အသေးဆုံးတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။)
"In addition to" - "သာမက …" ကို လေးနက်စေလိုသည့်အခါတွင် အသုံးပြုပါသည်။
- In addition to supplying the car industry, we supply many other customers. (ကားလုပ်ငန်းအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အပြင်၊ ကျွန်တော်တို့က အခြားသော ဖောက်သည်များအတွက်လည်း ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။)
မိမိကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောခြင်း - ၂
A. Tell me more about the company. (ကုမ္ပဏီအကြောင်း နောက်ထပ်ပြောပြပါဦး)
B. Basically we runaso-called ‘shopping search’ website. If you visit our site, you can find links toawide range of products and services. You can compare prices from various shops and find the best deal. (အခြေခံအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဈေးဝယ်ရှာဖွေမှုလို့ခေါ်တဲ့ ၀က်(ဘ)ဆိုဒ်ကို စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်လိုက်ရင် များပြားပြီး အမျိုးစုံလှတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အင်တာနက်လိပ်စာတွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်အမျိုးမျိုးက ဈေးနှုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးဝယ်ယူမှုကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
ပြောဆိုသူအနေဖြင့် အောက်ပါဝါကျတို့ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- You can make comparison between shops. (ဈေးဆိုင်တွေကို နှိုင်းယှဉ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။)
- You can compare A with B. (အေ နဲ့ ဘီကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။)
A. That sounds very interesting, but is it secure? (ကြားရတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချရပါ့မလား?)
B. Yes, in my view it’s far more secure than buying over the phone. (ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ဖုန်းကတစ်ဆင့်ဝယ်ယူတာထက်တော့ ပိုစိတ်ချရပါတယ်။)
မိမိရဲ့အချက်အလက်များကို မသေချာဟု ယူဆပါက အောက်ပါအတိုင်းပြောနိုင်ပါသည်။
- As far as I know, it’s more secure ... (ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့၊ အဲ့ဒါက ပိုစိတ်ချရတယ်။)
Permalink Reply by winmaraung on December 7, 2012 at 15:06
Permalink Reply by Aye Aye Cho on December 7, 2012 at 15:08
Good topic... Thank you
Permalink Reply by Pyae lay on December 7, 2012 at 16:44
this is useful thx
Permalink Reply by seint seint min on December 8, 2012 at 0:29
Thanksalot for about Topic cuz this very useful for me.
Permalink Reply by leonaing on December 8, 2012 at 4:57
Permalink Reply by Susil on December 8, 2012 at 11:32
Permalink Reply by Thaung Zaw on December 8, 2012 at 11:58
yes, that's enough. Thanks.
Permalink Reply by thanthansoe on December 10, 2012 at 13:45
Permalink Reply by Nang Khin Yadanar on December 10, 2012 at 15:07
Oh! very valuable lesson
Permalink Reply by thinnthinnhtay on December 14, 2012 at 20:35
Thank you , may i request will you sent about the Travels and Tour .Thank.....
Permalink Reply by Min Ai Mon Chan on December 17, 2012 at 9:59
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 6, 2013 at 14:17